အပူလှိုင်းတစ်ခုကဘာလဲ | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
နွေရာသီတွင်ကမ္ဘာ့ဒေသများစွာ၌အပူချိန်အလွန်မြင့်မားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးယူဆထားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် အပူအစွန်းရောက်ရနိုင်သည် ရက်အတော်များများ၊ ရက်သတ္တပတ်များနှင့်လများစွာပင်ကြာရှည်သည်။
4.1 ချီလီ, 2017
4.2 အိန္ဒိယ, 2015
4.3 ဥရောပ, 2003
4.4 စပိန်, 1994
အပူလှိုင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ရက်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်များစွာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတိုင်းပြည်၏ပထဝီဝင်အနေအထားကိုပါအကျိုးသက်ရောက်စေသောပုံမှန်မဟုတ်သောမြင့်မားသောအပူချိန်များဖြစ်ရပ်။ ဘယ်နှစ်ရက်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်? အမှန်တရားကတော့တရားဝင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မရှိဘူး၊
စပိန်နိုင်ငံတွင်မိုးလေ ၀ သဌာန၏အနည်းဆုံး ၁၀% တွင်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန် (၁၉၇၁ မှ ၂၀၀၀ အထိကာလကို ကိုးကား၍) မှတ်တမ်းတင်သောအခါအနည်းဆုံးသုံးရက်အတွင်းအပူလှိုင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီကန့်သတ်ချက်ကနိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးအများကြီးကွဲပြားနိုင်သည်။
ထဲမှာ နယ်သာလန် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်အပူချိန်ကို Utrecht (Holland) ၏မြူနီစီပယ်ဖြစ်သော De Bilt တွင်အနည်းဆုံး ၅ ရက်ကြာမှတ်တမ်းတင်သောအခါအပူလှိုင်းကိုစဉ်းစားသည်။
ထဲမှာ အမေရိကန်အကယ်၍ အပူချိန် ၃၂.၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်တွင် ၃ ရက် (သို့) ထိုထက်ပိုပြီးမှတ်တမ်းတင်ပါက၊
အချိန်အများစုသည် အဆိုပါ canicular ကာလ၌ပေါ်ပေါက်ပါတယ်များသောအားဖြင့်နွေရာသီတွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ The ကျောက်တုံး ၎င်းသည်နှစ်၏အပူဆုံးကာလဖြစ်ပြီးဇူလိုင် ၁၅ ရက်မှသြဂုတ်လ ၁၅ ရက်အကြားဖြစ်ပွားသည်။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအပူဆုံးနေ့ရက်များဟုဆိုသနည်း
နွေရာသီ၏ပထမနေ့ (မြောက်ပိုင်းခြမ်းရှိဇွန်လ ၂၁ နှင့်တောင်ဘက်ခြမ်းရှိဒီဇင်ဘာ ၂၁) သည်အပူဆုံးနေ့ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်ယင်းသည်အမြဲတမ်းမဟုတ်ချေ။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်သူ့ဟာသူလှည့်ပတ်သွားသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အနည်းငယ်မှေးမှိန်သွားသည်။ ၏နေ့ နွေရာသီနေရောင်ခြည်နေ၏ရောင်ခြည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုထိရောက်သည်။ သို့သော်ရေနှင့်ကမ္ဘာမြေသည်အပူကိုစုပ်ယူရုံမျှသာဖြစ်သော်လည်းအပူချိန်မှာ ပို၍ နည်းသွားသည်။
သို့တိုင် နွေရာသီသမုဒ္ဒရာရေတိုးတက်အဖြစ်ယခုတိုင်အောင်လေထုကိုလန်းစေ, နှင့်မြေပြင်အလွန်ပူပြင်းတဲ့ကာလကိုစတင်ရန်လုံလောက်သောတက်နွေးကြလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သည့်onရိယာပေါ် မူတည်၍ ပိုမို၍ နည်းပါးသောပြင်းထန်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်မြေထဲပင်လယ်ဒေသတွင်အပူလှိုင်း၏ရာသီဥတုတွင်အလွန်ပူပြင်းသောအပူလှိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
မိုးခေါင်မှုကာလအတွင်းအပူလှိုင်းများဖြစ်ပေါ်နေပါကသစ်တောများသည်မီးလောင်ကျွမ်းမည့်အန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့နေရသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ပေါ်တူဂီတစ်နိုင်ငံတည်း၌ပင်ကီလိုမီတာ ၃,၀၁၀ ကီလိုမီတာကျော်မီးလောင်ခဲ့သည်.
ကလေးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ဖျားနာသူများသည်အပူလှိုင်းများအထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ 2003 ခုနှစ်တွင်တ ဦး တည်း၏ဥပမာနှင့်အတူဆက်လက်, တစ်ပါတ်အတွင်းသေဆုံးသူ ၁၀၀၀ ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်နှင့်ပြင်သစ်တွင် 10.000 ကျော်။
အရမ်းပူတဲ့အခါ၊ ငါတို့စိတ်သဘောထားတွေကအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်အရမ်းပူတဲ့အခါ၊ သင့်တော်တဲ့အစီအမံတွေမလုပ်ရင် ကျနော်တို့အပူလေဖြတ်သို့မဟုတ် hyperthermia ခံစားရတယ်။ အထူးသဖြင့်အငယ်ဆုံးနှင့်အသက်အကြီးဆုံးနှင့်ဖျားနာသူများနှင့်အ ၀ လွန်သူများသည်အများဆုံးသောလူ ဦး ရေဖြစ်သည်။
အပူဆုံးကာလတွင်အချည်းနှီးမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့အအေးခံရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းအတွက်ပန်ကာများတပ်ဆင်ပြီးလေအေးပေးစက်ကိုဖွင့်သည်။ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောပြaနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် တိုးမြှင့်စားသုံးမှုပါဝါပျက်ကွက်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်.
ဥရောပ, 2003 ခုနှစ်တွင်အပူလှိုင်း
ဇန်နဝါရီ ၂၅ မှ ၂၇ အကြားချီလီသည်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအပူလှိုင်းများထဲမှတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခဲ့သည်။ Quillónနှင့် Cauquenes တို့၏မြို့များတွင် ၄၅ံC နှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။ အသီးသီး44,9ºCနှင့်44,5ºCတို့ကိုမှတ်ပုံတင်သည်.
မေလတွင်အိန္ဒိယ၌ခြောက်သွေ့ရာသီအစတွင်အပူချိန် ၄၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ပိုသောအပူချိန်မြင့်တက်လာပြီး၊ လူပေါင်း 2.100 ကျော် လ၏ 31 အထိ။
၂၀၀၃ အပူလှိုင်းသည်ဥရောပသားများအတွက်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်များကိုဥရောပတောင်ပိုင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတန်ဖိုး ၄၇.၈ºC၊ Denia (Alicante, Spain) သို့မဟုတ် ၃၉.၈ºC တွင်ပါရီ (ပြင်သစ်) တို့ဖြစ်သည်။
ကွယ်လွန်သွားပြီ 14.802 ကလူ သြဂုတ်လ 1 နှင့် 15 အကြား။
ဇွန်လနောက်ဆုံးအပတ်နှင့်ဇူလိုင်လပထမ၊ စပိန်နိုင်ငံ၊ အထူးသဖြင့်မြေထဲပင်လယ်ဒေသတွင်အပူချိန်အလွန်မြင့်မားသည်။ Huelva (၄၁.၄ºC) သို့မဟုတ် Palma (Mallorca) ၃၉.၄ºC ။
ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းထားပါရေမသောက်မှီတိုင်အောင်မစောင့်ပါနဲ့။ အပူလွန်ကဲမှုကြောင့်အရည်များသည်လျင်မြန်စွာပျောက်ဆုံးသွားသည်။ ထို့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ပုံမှန်ရေရရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ထွက်မသွားပါနှင့်: ဤအချိန်အတောအတွင်းရောင်ခြည်များစွာပိုမိုဖြောင့်မတ်စွာရောက်ရှိလာသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်မြေပြင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုမိုသက်ရောက်မှုရှိသည်။
နေမှကာကွယ်ပါအလင်းရောင်ရှိသောအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ပါ (အလင်းရောင်သည်နေရောင်ခြည်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေပြီး) နေကာမျက်မှန်တပ်ပါ။ ပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်အရိပ်ထဲတွင်သာနေပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ » အပူလှိုင်းများ » အပူလှိုင်းတစ်ခုကဘာလဲ